Samachar Batika || News from Nepal » यस्ता बानी भएका केटाहरुलाई केटीहरुले एक नजरमै मनपराउछन। तपाईंमा कुन कुन छन् ?
यस्ता बानी भएका केटाहरुलाई केटीहरुले एक नजरमै मनपराउछन। तपाईंमा कुन कुन छन् ?
हरेक युवती चाहन्छन् आफ्नो जीवनसाथीमा स्पेशल गुण होस् । उसको हरेक ब्यवहार अरुभन्दा विशेष होस् ।हुनत केहि केटाहरुमा यस्तो स्पेशल बानी हुने गर्दछ ।
जसलाई केटीहरुले साह्रै मन पराउँछन् । आमअवस्थामा केटाहरु केटीलाई आफूप्रति आकर्षित र प्रभावित बनाउन कुनै कसर बाँकी राख्दैनन् ।
तर केटाहरुमा हुने केहि बानीले भने केटीलाई बिना मेहनत सजिलै प्रभावित पार्दछ । के के हुन् केटीलाई इम्प्रेश पार्ने केटाका बानिहरु ?
कतिपय अवस्थामा साना गल्ती वा कारणको सहारामा केहि केटाहरु केटीबाट टाढा हुने गर्दछन् । तर केटी मान्छे आफुलाई हर हमेशा जस्तोसुकै परिस्थितिमा साथदिने ब्यक्तिको खोजीमा हुन्छन् ।कोहि केटामा यी बानी भेटेमा उनीहरु केटीको नजरमा आफै पर्ने गर्दछन् ।
केटी मानिसमा आफ्नो कुरा सुनाउने बानी स्वभावतः केटाभन्दा बढी हुन्छ । यस्तोमा कुनै केटा उनीहरुको कुरा बिना रोकटोक ध्यानपुर्वक सुनिदिन्छ भने यसले पनि केटी मानिसलाई प्रभावित पार्दछ ।तसर्थ आफ्नो कुरा सुनाउनुको सट्टा उनीहरुको कुरा सुन्नमा ध्यान दिनुहोस्
हुनत केहि केटाहरुमा यस्तो स्पेशल बानी हुने गर्दछ ।
प्रकाशित मिति १० असार २०७७, बुधबार ०३:४४